Il etait une fois... Madagasikara | rafozan-doza |
Il etait une fois... Madagasikara
Published on 06/25,2010
T@ i neninay feno 50 taona izany dia nirary soa aho. J'ai fait un voeux no tena tiako tenenina fa tsy haiko ny tena dikany @ malagasy... !doty
T@ i dadanay feno 50 taona koa dia mbola nirary soa ho azy ihany koa aho...
Rahampitso ny fetim-pirenentsika, hahatratra 50 taona ny repoblikan'i Madagasikara. Dia mba te hirary soa ho azy, ho antsika zanany ihany koa aho. Tsy azo teni-tenenina fa sao dia tsy tanteraka an!
Eto aho dia manainga antsika izay mahatsapa tena fa hoe Malagasy, taranaka malagasy na mahay miteny gasy na tsia mba hirary soa ho azy. Ny zavatra tsapako manko rehefa nojerena ny zavatra voalazantsika tao @ ilay hoe il etait une fois Madagascar iny dia somary "sceptique" hoe tsy ampy finoana ny @ ho avy mamirapiratra an'i Gasikara isika. Ka hoy aho hoe tsy aleo mba izay no ataontsika fanomezana kadoa ho azy rahampitso ny hoe firariantsoa ho an'ny tanintsika.
somary maizina ary manjavona dia manjavona ny hoaviny noho ireo krizy sy ny olana isan-karazany mianjady aminy, amin'ny vahoaka sy mponina ao aminy. Fa ny fanombohana dia ny fanana finoana fa indray andro any tsy maintsy mbola ho avy ilay maraina hiposahan'ny masoandro, hanazava ny androntsika. Mazava ho azy fa raha tsy asiana fiovana sy hoe arahin'asa ny firariantsoa dia ho zava-poana ihany. Mbola dingana hafa ihany koa izay fa ny androany aloha dia ny hoe: tiako ny taniko ary mirary fiadanana ho an'ny mponina ao aminy aho...
Dia manainga anao ary hanao "voeux", dia tahirizo ao am-po izay. Tsara kokoa ra soratana @ taratasy na hoe tahirizina @ solosaina. Alefa email mintsy aza e (GooGle calendar milay be fa afaka handefasana email any @ futur) ... ho vakiana rehefa afaka 50 taona indray, raha mbola velon'aina... hiadana sy ho finaritra, e sambatra tokoa izahay...
Il etait une fois Madagasikara...
... manaova fety finaritra daholo.
ps: lol be le hira... i know, right?
Posted by simplex at 17:49 Hametraka hevitra (1) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Dago